eHimalaya Online || News from nepal » विज्ञानका मापदण्डका अनुसार ४ महिलालाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर महिलामा राखियो हेरौ तस्बिरमा ।
विज्ञानका मापदण्डका अनुसार ४ महिलालाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर महिलामा राखियो हेरौ तस्बिरमा ।
२०७८ असार १८ गते शुक्रबार ११:५६
एजेन्सी। धेरै सर्वेक्षण अनुसार, मनोरन्जन उद्योगमा, अभिनेत्रीहरु को सबै भन्दा सुन्दर वा कुनलाई बढी मन पराइएको छ। यसमा, सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अभिनेत्रीलाई ट्प बताईन्छ। जे होस्, यसमा, इन्टरनेटमा अधिक उपस्थित फ्यानहरूले मात्र...
एजेन्सी। धेरै सर्वेक्षण अनुसार, मनोरन्जन उद्योगमा, अभिनेत्रीहरु को सबै भन्दा सुन्दर वा कुनलाई बढी मन पराइएको छ। यसमा, सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अभिनेत्रीलाई ट्प बताईन्छ। जे होस्, यसमा, इन्टरनेटमा अधिक उपस्थित फ्यानहरूले मात्र सबैभन्दा सुन्दर को हो भनेर निर्णय लिन सक्दछन्। अब एक तरिका अगाडि आएको छ जसको माध्यमबाट वैज्ञानिक विधि बताइएको छ कि संसारको सबैभन्दा सुन्दर महिला को हो।
पुरातन ग्रीक विधि ‘ब्यूटी फाइको गोल्डन रेशियो’ को मापदण्डका अनुसार, हेर्दा सुन्दरताको प्रतिशत पनि देखा पर्‍यो, जसले कसलाई अझ सुन्दर छ भन्न सजिलो बनायो। यस वैज्ञानिक विधिमा आँखा, ओठ, आइब्रो, चिन र अनुहारको आकारको आधारमा, यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि कसलाई सबैभन्दा सुन्दर महिलाको उपाधि दिनुपर्दछ। यी नापहरू लन्डनका प्रख्यात कस्मेटिक सर्जन डा। जुलियन डी सिल्भाले गरेका थिए। थाहा पाउनुहोस वैज्ञानिक विधिको मापनमा कुन महिला संसारकै सुन्दर ठहरिन ?
गोल्डेन रेशियोको अनुपात मापनका अनुसार सुपर मॉडल बेला हदीदलाई विश्वको सबैभन्दा सुन्दर महिलाको रूपमा नाम दिइएको छ। उनको अनुहार ९४.३५ प्रतिशत उत्तम रहेको पाइयो।
बियोन्सी यश सुचीमा पप गायक बेयोन्सीले दोस्रो स्थान पाएकी छिन । उनको अनुहार ९२.४४ प्रतिशत उत्तम रहेको बताइएको छ।
एम्बर हर्ड हलिवूड अभिनेत्री एम्बर हर्डले ९१.८५ प्रतिशत प्राप्त गरेर उनले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेकी छिन ।
एरीयाना ग्रेन्डे पप गायिका एरियाना ग्रान्डे ९१.८१ प्रतिशतको साथ चौथो स्थानमा थिइन।
डा. जुलियनका अनुसार बेला हदीद उनको अनुहारको सबै भागहरू नाप्न एकदमै राम्रो थिई। उसको चिनको राम्रो स्कोर थियो। यसका लागि उनलाई ९९.७ प्रतिशतको स्कोर दिइयो। यसको मतलब १०० मा केवल ०.३ प्रतिशत कम छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुहारको सुन्दरता नाप्ने यो गणितीय विधि ललाटको कपालबाट शुरू हुन्छ र आँखाको बीचबाट मापन गर्न थाल्छ। यस मापन पछि नाकको तलदेखि चिनको तलसम्म गरिन्छ। तब व्यक्तिलाई अधिक सुन्दर मानिन्छ जब उसका सबै / उसका प्यारामिटरहरू समान स्कोरको साथ आउँदछन्।
प्रकाशित मिति २०७८ असार १८ गते शुक्रबार ११:५६